मनाङमा जोडियो राष्ट्रयि प्रसारण लाइन | Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper
मनाङमा जोडियो राष्ट्रयि प्रसारण लाइन
Published On : १८ फाल्गुन २०७७, मंगलवार १६:४५
लमजुङ — हीमाली जिल्ला मनाङ राष्ट्रयि प्रसारण लाइनको सञ्जालमा जोडएिको छ । लघुजलवद्यिुत्‌को भरमा रहेको मनाङमा अब केन्द्रीय लाइनको बजिुली बल्न थालेको छ ।
लमजुङको मस्र्याङ्दी गाउँपालकिा-५ घेर्मुस्थति राधी साना जलवद्यिुत् आयोजनामा नर्मिति सबस्टेसनबाट २९ कमिी तार टाँगेर ३३ केभी वद्यिुत् प्रसारण लाइन चामे गाउँपालकिा-१ स्याक्र्युस्थति सबस्टेसनमा जडान गरएिको हो । उक्त सबस्टेसनमा ३१५ केभीएको ट्रान्सफर्मर जडान गरेर ११ केभीएको प्रसारण लाइन सदरमुकाम चामे पुर्‍याइएको छ ।
बजार क्षेत्रलाई ध्यानमा राखी चामेमा ५० केभीएको ट्रान्सफर्मर जडान गरेर मटिर वतिरण गरएिको छ । सरकारी कार्यालय क्षेत्रमा १ सय केभीएको ट्रान्सफर्मर जडान भइरहेको छ ।
नेपाल वद्यिुत् प्राधकिरण मनाङ वतिरण केन्द्रका प्रमुख मलिन सुवेदीका अनुसार पोल गाड्नुका साथै तार टाँगेर सकएिको २ वर्षपछ िराष्ट्रयि प्रसारण लाइन जडान गरएिको हो । राँधीदेख िस्याक्र्युसम्म करबि ४ सय ६० वटा टेलेस्कोपकि पोल राखएिको छ । फागुन २ देख िवद्यिुत् चार्ज गरएिकोमा ॅट्रपिङि’ नरहेको उनले दाबी गरे ।
वद्यिुत्लाई मनाङ-ङस्यिाङ गाउँपालकिा-१ भ्राताङमा जडान कार्य थालएिको छ । चामेदेख िकरबि ९ कलिोमटिरसम्म प्रावधिकि काम सकेर लाइन जडान तयारी गरएिको छ । भ्राताङस्थति एग्रो मनाङ प्राल ि९स्याउ फार्म० का अध्यक्ष समराज गुरुङले ॅथ्री फेज’ लाइन जडान गरी स्याउ भण्डार संचालनको तयारी भइरहेको बताए । ॅअहलिेसम्म केन्द्रीय प्रसारण लाइन नहुँदा कफी पन िराम्रोसँग पाक्ने थएिन । अब हाम्रो फार्म पूर्ण क्षमतामा संचालन हुनेछ । स्याउ कुहनिे छैन । पर्यटकले राम्रो सेवा पाउनेछन्,’ उनले भने ।
प्रतनिधिसिभा सदस्य पोल्देन छोपाङ गुरुङले आफ्नै स्याउ उद्योगमा समस्या हुनुका साथै मनाङमा लघु जलवद्यिुत्‌बाट बजिुली अपुग भएपछ िप्रसारण लाइनका लाग िपहल थालेको बताए । ॅपहलिे जडान भएको सामग्रीमा प्रावधिकि समस्या आयो । पछ िबझ्दै जाँदा नयाँ सामग्री पाइन्छ भनेपछ िउर्जा मन्त्रालयमा गएर पहल गर्‍यौं । अहलिे हाइटेन्सन लाइन मनाङ पुगेको छ,’ उनले भने ।
ऊर्जा मन्त्रालयले प्राधकिरण मार्फत वनियिोजन गरेको ७२ लाख ८२ हजार बजेटमा पछल्लिो काम सकेर मनाङमा केन्द्रीय प्रसारण लाइन पुर्‍याइएको सुवेदीले बताए । उनका अनुसार जयकालकिा भगवतीरआशुतोष इन्फ्रा जेभीले १ वर्षसम्म सक्ने गरी कामको जम्मिा लएिकोमा ४ महनिाअघ िनै सकेको छ ।